Juan Herranz. Qorista, dib u eegista, qorista
La xidhiidh - Aniga igu saabsan
Waxaan u qoraa...
Tani waa halkaan anigoo jiidaya gadaal qorrax dhaca. Dhowr sano ayaa ka soo wareegtay xilligaas laakiin runtii ma rabo inaan beddelo sawirka, runtii. Aafooyinka ka dhasha waqtiga iyo kuwa kale ee xunxun ...
Ujeedadu waxay tahay, sida aad isla markiiba u malaynayso markaad dhex gasho blog-kan, inaan qoro faallooyin iyo dhaleecayn inta badan sheeko-yaal, laakiin aan lahayn takoorid cad. Waxa aanan akhriyin waxa ay soo mareen saaxiibo wax akhriya oo wanaagsan ama qaraabo. Sidaas awgeed dhammaanteen waxaynu u samaynaynaa booskan philias-suugaaneed iyo nacaybka ugu horreeya.
Dabcan, anigoo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah in Pisuerga uu dhex maro Valladolid, waxaan sidoo kale ka hadlaa buugaagtayda, oo aan u hibeeyo waqtiga yar ee firaaqada ah ee ii hadhay. Maadaama aan xasuusan karo, anigoon garanayn sida si sax ah loogu adeegsado dhibcaha sababaha wax ka sii "faa'ido badan", waxaan u sameeyaa kaydsigayga qoraa sheeko oo mararka qaarna waxaan qoro buugaag cilmi baaris ah.
Taasna, wax kasta oo aad rabto inaad ii sheegto, waxaad iigu sheegi kartaa foomka kore ☝️.
Inta soo hartay, haddii aad ku adkaysato akhriska, waxaan fursad u heli doonaa inaan naftayda si fiican u baro:
Waxaan ku dhashay Zaragoza June 14, 1975, isla waqtigaas oo Real Zaragoza ay gool ka dhalisay Barça quarterfinals -ka Copa del Rey. Laga soo bilaabo isbitaalka, oo ku xigta Romareda, aabahay ayaa u dabaaldegay yoolka iyo dhalashadayda. Farxad weyn sida ciyaartoy kubbadda cagta oo la soo gaabiyey ayaa la siiyay awooddayda liidata oo kubad dhexdayda cagaha dhex martay. Malaha taasi waa sababta, ka dib markii aan helay Dibloomada Jaamacadda ee Qalin -jabinta Bulshada, waxaan diiradda saaray hiwaayad kale, qoris, sii dheeraynta u -jeedkii hore ee wax -soo -saarka.
Tan iyo markii aan daabacay sheekadaydii ugu horreysay, 2001dii, Waxaan raadinayay sheekooyin cusub oo aan sheego iyo waqtiga loo baahan yahay inaan fadhiisto si aan u qoro. Wax lagu khasbo ma jiraan, si iskood ah ayay u soo baxaan ama qof baa ii soo gudbiya oo aakhirka i qanciya. Habsocodku wuxuu u dhashaa si aan la saadaalin karin, si loo dhalan -geliyo maalinba maalinta ka dambaysa mala -awaalka iyo warqadda.
Sidaa darteed, waxaan u dhadhaminayaa mihnadda qoraaga si aniga ii gaar ah. Markaan dib u jaleeco waxaan arkaa, inta u dhexeysa yaab iyo qanacsanaanta, laba iyo toban buug oo dhabarkayga lagu daabacay: “Xusuusta yeyda","Fursad labaad","Wararka Cassandra","doorin","Laga bilaabo kubadda cagta ilaa kubbadda cagta","Dagaalyahannada Ejea","Sugitaanka malaa'igta" «El sueño del santo"," Real Zaragoza 2.0 "" Halyeeyada lumay ""Esas estrellas que llueven"Iyo" Gacmaha iskutallaabtayda. Dhiirrigelinta sii wadista qorista marka fikradaha cusubi soo baxaan.
Buugga "Xusuusta yeyda" tifaftirka Egido, 2001
Novel "Fursad labaad" Mira editores, 2004
Mugga: "Cassandra News" Espiral Editorial, Bilbao, Juun 2006
Wadashaqaynta buugaagta “Wixii aan ahaan jirnay oo ahaan doona” Ejea 2002
Wax -ku -biiriyaha buugga: "Abuuritaannada Sabtida" Ururka Qorayaasha Aragon 2007
Tifaftiraha Dossier "Abuurayaasha Da'da yar, 2.002" Ejea de los Caballeros
Guddiga tifaftirka ee Majaladda Suugaanta Gobolka "Ágora"
Kaqeybgalka majaladda suugaanta "Criaturas Saturnianas" lambarkeeda 6 ee 2008
Tifaftiraha ugu weyn ee buugga xusuusta ee SD Ejea. Juun 2008
Buug: "Halgamayaashii Ejea". Juun 2009
Novel: "Beddel" Tifaftiraha Andrómeda - Ururinta Dunida Fantastic. Maarso 2010
Novel: "Sugitaanka malaa'igaha" - Daabacadaha Brosquils. Jan 2011
Isuduwaha tifaftiraha bandhigga sawirka María Luna: «Esencial y Cotidiano»
-Qiso:El sueño del santo»- Fiiri Tifaftirayaasha. 2013
-Codka: "Halyeeyada lumay" - Libros.com 2015
-Qiso:Esas estrellas que llueven»- Fiiri Tifaftirayaasha. 2016 (qaybta labaad ee "El sueño del santo»)
-Qoraal: «Hubkii Layskayga» - Amazon. 2016
SHAHAADOOYIN IYO SHARAFO:
Tartanka Abaalmarinta 1aad ee Abaalmarinta Sannad -guurada Kontonaad Enseñanzas Medias Cinco Villas 2002
Abaalmarinta 1aad ee Sheekada Gaaban Sheekada Asociación Cultural Fayanás 2004
Tartanka sheekada gaagaaban ee caalamiga ah ee Finalist II "Akhristaha samirka" 2004
Tartanka Sheekooyinka Gaaban ee X Final “Juan Martín Sauras” 2005
Dhammeystirka Tartanka Sheekooyinka Caalamiga ah ee Coyllur-Science 2005. Peru
Finalist I Abaco 2006 Tartanka Sheekada Gaaban
Abaalmarinta 1aad ee XI ee sheekooyinka cajiibka ah Gazteleku 2006
Tartanka Abaalmarinta 2aad ee sheekooyinka Madxafka Macdanta ee Basque Country 2006
Abaalmarinta 1 -aad ee XVII Tartanka Nolosha Gaaban "Calamonte 2007"
Abaalmarinta 4aad ee Abaalmarinta Sheekooyinka "Villa de Cabra del Santo Cristo 2007"
Xusuus gaar ah oo gaar ah, oo ku jira qeybta sheekada, ee Abaalmarinta Andrómeda 2007
Tartanka Sheekada Gaaban ee Abaalmarinta IV Abaalmarinta "Villa de Cabra del Santo Cristo 5"
Tartanka Finalka VI Briareo Tartanka Sheekada Gaaban. Cuenca 2008
Finalka I I Contest "Cuentamontes" Elda 2008
Tartanka Novel Final Horror Novel "Villa de Maracena" 2008
Finalka XII Gazteleku de Sestao Tartanka Sheeko Gaaban 2009 (…)
Tartanka Liiska Gaarka ah ee Qareennada May-June 2010 Finalist
WAXAAD KU DHAWAAHAY BUUGGAYGII DHAMAAN HALKAN, GUJI:
IN LAGA TASHIYO MAKTABADDAADA
Anigoo ka faa’iidaysanaya waxqabadkaygii ballaarnaa ee dunida suugaanta, muddo ayay ka soo wareegtay markii aan ku soo biiray dunida xiisaha leh ee qorista nuxurka. Iyada oo leh tilmaamaha aasaasiga ah ee fikradda ah in la muujiyo, waxaan kuu qori karaa qoraallo dabeecad shaqsiyeed ah, galitaannada balooggaaga ama boostada oo aad ku fuuli karto jagooyinka makiinadaha raadinta internetka.
Qoraalka maadada waxay leedahay farsamooyinkeeda. Ereyadu waa inay sameeyaan wax ka badan inta la isku daro si loo soo saaro jumlado. Midba midka kale waa inay soo jeediyaan, soo jeediyaan, dhiirigeliyaan, soo jiitaan, xittaa curiyaan muusikada iyo heesaha farriimaha si ay u fahmaan kuwa akhrinaya, sida heesaha seeriga ah ee aan laga adkaan karin.
Ugu dambayntii, dhammaan qoraalku ma joojiyo suugaanta; iyadoo ujeedadu tahay kicinta dareenka ama gudbinta fikradaha; iyada oo la rabo in la qanciyo ama la daneeyo in la shaaciyo.
Qoraalka waxaad barataa sida wax loo qoro. Ka dib in ka badan shan iyo toban sano oo riixaya xarfo iyo xarfo badan, oo ay iga dambeeyeen laba iyo toban buug iyo boqollaal meelood oo qoraal ah ayaa la dhammaystiray, waan ogahay in aan ku wareejin karo fikradaha iyo fikradaha iyada oo loo marayo suugaantaas ulakaca ah ee ku dhex milmaysa dhammaan qoraalka wanaagsan.
Hore u soco oo ii sheeg waxaad rabto inaan dunidaada u sheego. Aan helo ereyadaada ugu fiican.